Waqtiga Diyaarinta Sannadka Cusub ee Shiinaha 2021
Fasaxa sannadka cusub ee Shiinaha 2021 waa bisha Febraayo 12 illaa iyo 26ka Febraayo. Maaddaama ay tani tahay maalin qaran oo guud waxay saameyneysaa dhammaan wax soo saarka Shiinaha. Intaas waxaa sii dheer, maadaama ay wali hubanti la'aan badani kajirto cudurka faafa ee coronavirus-ka adduunka, iyo waayo aragnimadeena holi ee Sannadka Cusub ee hore ...
Bandhigga Elektiroonigga Koonfurta Shiinaha ee Shenzhen
Electronica, oo ka mid ah bandhigyada hormuudka ka ah warshadaha elektarooniga, waxay dhacdadeedii ugu horreysay ka furaysaa Koonfurta Shiinaha. Bandhigga 3-da maalmood ah wuxuu ka bilaabanayaa Nofeembar 3, 2020 xarunta cusub ee Caalamiga ah ee Shenzhen. Bandhigga ...
Dabaaldegga Mid-Dayrta Shiinaha iyo maalinta Qaranka
Sannadkan dabaaldegga Mid-Dayrta Shiinaha iyo maalinta Qaranku waxay dhacdaa isla usbuuca; 1aad - 7aad Oktoobar. Maaddaama ciidahan ay saameyn ku yeelan karaan wax-soo-saarka Shiinaha heerar kala duwan, waxaan marwalba idinla diyaarineynaa qorshe-hawleed si wadajir ah si aan u helno habab kala duwan oo looga fogaado ...
Wareegyada Pandawill ee ExpoElectronica
Pandawill Circuits, oo ah xirfadle PCB & PCBA oo wax ka iibiya Shenzhen China ayaa ku soo bandhigi doona teknolojiyaddiisa PCB iyo adeegyada isku imaatinka PCB bandhigga elektiroonigga ee ugu weyn Ruushka. Kaalay oo la kulan Stephen oo ka socda Pandawill Circuits A284 si aad ugala hadasho dhammaan wax soo saarkaaga PCB iyo Dameer ...
Adeegga La PC PCB Waa La Heli Karaa
Macaamiisheena qiimaha, qaabeynta PCB iyo adeegyada nashqadeynta waa mid ka mid ah siyaabaha aan uga caawinno macaamiisheenna inay si dhakhso leh suuq ugu helaan maaddaama kooxdeena injineernimada ay leeyihiin waayo-aragnimo dhab ah oo dhab ah oo adduunka ah oo loogu talagalay sameynta PCB-yada waxqabadka iyo soo-saarista. Kooxdayada injineerada iyo wadayaasha CAD / CAM ayaa la heli karaa t ...
Shiinaha Sannadka Cusub 2019, Sannadka Doofaarka
by admin on 19-01-01
Fasaxa sannadka cusub ee Shiinaha Fasaxyada sannadka cusub ee Shiinaha ee sannadka cusub ee 2019 waa Febraayo 4 illaa 10 Febraayo. Sannadka Cusub ee Shiinaha waa fasaxa dhaqameed ee ugu muhiimsan Shiinaha. Waxaa sidoo kale loo yaqaan 'Festival Festival'. Dabaaldegyada Sannadka Cusub ee Shiinaha ayaa dhaqan ahaan ka soo bilaaban jiray sannadka cusub ee Shiinaha ...